SRTV Wararka ONLF ee Gudaha waxaa ugu Muhiimsan warka Ginbot-7 & OLF. | ogaden24
SRTV Wararka ONLF ee Gudaha waxaa ugu Muhiimsan warka Ginbot-7 & OLF.
Sep 10, 2018 - Aragtiyood
Jabhada ONLF waxay Labadii Todobaad ee Lasoo dhaafay Gudaha Ogadenia kawaday Abaabul iyo shirar dadwayne oo Guud ahaan shacabku si Kal iyo Laab ah u soo dhoweeyeen, sidoo kale madax sare oo kasocota Jabhada ONLF ayaa magaalada Diridhaba si aan Horay u dhicin loogu soo dhoweeyay.
Sidoo kale Jabhadu waxay maalinimadii shalay ahayd kuqabatay magalada Diridhaba shir ayna u kala Hadhin shacabka ree Diridhaba, waxaana shirkaasi Goob Joog ahaa wafdigii Jahada ONLF kasocday ee uu Hogaaminayay Hogaanka Qorshaynta iyo Cilmi baadhista JWXO mudane Xuseen Nur.
Wafdigaasi miisaanka culus iyo Hawlaha baaxada leh ee ay Gudaha Wadanka Ogadenia kawadaan Telefeshinka Kaliya ee codka deegaanka kuhadla kuna sugan Goobaha ay Jabhadu kahawlgalayso, Halayso majiro Haba-yaraatee Hal Qodob oo War ah oo ilaa iyo Hada ay kasoo Tabiyeen, waxaana muuqata in si ula kac ah wararka laxidhiidha Jabhada ONLF Cagta loo saarayo.
Dhinaca kale Wafdi uu Hogaaminayay Gudomiyaha Jabhada Ginbot 7- oo maalinimadii shalay ahaa kadagay magalada Addis ababa, waxaa Telefeshinku uu kubixiyay wakhti kabadan 45: daqiiqo oo xitaa Telefeshinka EBC-du uusan kubixin, waxay baahinayeen dareenka iyo muuqaalada dadkii soo dhowaynayay Berhanu Naga waxayna soo Qaateen dhamaan shirkiisii Jaraa’id oo ay kudareen Fasiraad dheer ah iyo Falanqayn.
Sidoo kale Telefeshinku waxaa si mugleh uga Hadlay Jabhada OLF iyana ay siiyeen daqiiqado ay kusheegayaan in madaxdii Jabhadaasi Horay magalada Addis ababa loogu soo dhoweeyay ayna ilaa iyo Hada kusugan yihiin, iyaga oo door fir-fircoona kaqaadanaya isbadalada kasocda Gudaha Itobiya.
Hadaba Telefeshinkan oo ah Telefeshinkii dawlada deegaanka Somaalida maxay tahay sababta uu uga Hadli waayay Hawlaha Jabhada ONLF kawado Gudaha Ogadenia oo si Toosa u khuseeya aadna looga wada sugayo, ee uu uga waramayo Hawlaha Ururada kale ee aan khusayn kuwii ay khusaysana ay ba Tooska u Tabaniyaan.
Waxaa Hubaala in mamulka cusub ee Mustafe Cagjar uusan ku Qanacsanayn Hawlaha Jabhada iyo dhaq-dhaqaaqyada kala duwan ee ay kawado Gudaha Ogadenia, cadayna waxaa kuugu Filan wariyaha SRTV ee magalada Diridhaba waxaa uu si Toosa u duubayay shirkii magalada Diridhaba, balse dadaalkii wariyaha iyo Barnaamijyadii uu wakhtiga Galiyay waxaa ka Qiima badnaaday Gudomiyaha Ginbot 7- oo Addis ababa kadagay.
Si kastaba Ha’ahaatee madaxwayne Mustaf waxaa lagudboon inuu wajaho xaqiiqda Hortaala ee ah baahida dadkeenu maanta u Qabo midnimada iyo is cafinta, uuna meesha kasaaro Hab-dhaqanka Fogaynta iyo Indha kaqarsiga siyaasadeed kamuuqdo, taasi oo Hadii ay sii socoto aynu Ognahay cida kaliya ee ka Faa’iidaysa inay noqonayaan mamulka Addis ababa iyo cadawgii dadkeena Horay u dhibaateeyay.